China Ems pcb Assembly Kugadzira uye Fekitori | KAISHENG pcb
MuPCBFuture, isu tinotora matanho epakati ekuona kuti mhando yemabasa edu inowirirana uye inodarika zvinotarisirwa nevatengi vedu. Chikwata chedu chinoshandisa yazvino muPCB tekinoroji nemidziyo kusangana nezvinodiwa zvehunhu. Isu tiri kuzvipira kupa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye masevhisi akatibatsira kuwana kuvimba nekuremekedzwa kwevatengi vedu.
Metal bemhapemha: HASL inotungamira mahara
Akaturikidzana 14 rukoko pcb
Base Material: Yakakwirira TG FR-4
Metal Kuputira: HASL - Tungamira Mahara Mamiriro Ekugadzira: SMT + Germinales: 14 rukoko pcb
Chinyorwa Chekutanga: Yakakwira TG FR-4 Certification: SGS, ISO, RoHS MOQ: Kwete MOQ
Solder Mhando: Lead-Yemahara (RoHS Inoenderana) One-Stop Services: Zvikamu, pcb kugadzirwa, pcb Assembly Kuedzwa: 100% AOI / X-ray / Visual Test
Tehnology Tsigiro: Yemahara DFM (Dhizaini YeKugadzira) Tarisa Mhando dzeAssemblies: Mixed Technology PCBA Yakajairwa: IPC-a-610d
Keywords: EMS pcb Assembly, pcb Assembly Service, pcb Assembly Maitiro, pcb Assembly Vagadziri, pcb Assembly Vagadziri, pcb Assembly Mutengo,
Kubva pane yakajairwa uye tsika pcb yekunyepedzera kutendeuka pcb mhinduro, PCBFuture yakazviratidza pachayo seye-yekumira sevhisi yezvinhu zvese PCB.
Nei uchishandisa yedu PCB musangano webasa?
Isu takazvipira kupa zvinoshamisa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro pamakwikwi emitengo. Isu takawiriranisa bhizinesi redu nechikwata chevakabatana vehukama kusangana nezvinogara zvichichinja zvevatengi vedu.
Kubva pakupa mabhodhi edunhu kusvika kumagetsi ekupedzisa emagetsi, isu tine timu yehunyanzvi. Nekuda kweruzivo rwedu rurefu, tinogona kupa zvakanakisa pahunhu, kuendesa kutendeseka, uye kugona kwehupfumi.
Isu tichaendesa zvigadzirwa zvako nekukurumidza kupfuura chero chero mumwe mugadziri wePCB kunze uko mumusika.
Yakanyanya kunaka pahunhu
Inguva yakadii iyo yekuendesa nguva mushure mekunge vatengi varaira iwo PCBA mabhodhi?
Nguva yekuendesa yePCBA inowirirana chaizvo nekutangisa-kushanda. Vatengi vanofanirwa kutanga vatora zvinhu zvinotevera. Izvo zvinhu zvinogona kuendeswa mukati memazuva matatu mushure mekunge zvese zvinhu zvapera. Kana paine DIP yekugadzirisa, zvinotora mazuva 5-7 kuendesa. Kana paine odha yekukurumidza, tinogona kuzivisa pachine nguva uye tinogona kuita mamwe marongero.
Ruzivo rwekugadzirira PCBA kugadzirisa:
1. Yakagadzirwa kugadzirwa BOM
2. Pcb mafaira;
3. Via faira;
4. Mafaira eJigsaw Gerber;
5. Chinzvimbo chinongedzera faira;
6. Runyangadzi runyorwa rwe SMT kumberi uye kumashure zvinhu, DIP zvigadzirwa uye rondedzero.
Isu Tinonunura epamusoro mhando wedunhu bhodhi magungano panguva uye mukati mebhajeti, inotsigirwa neakanakisa sevhisi sevhisi uye zvisina maturo kugadzirisa uye kudzoka marongero ekupa akakwirira mhando. Kana iwe uine chero mibvunzo kana kubvunza, inzwa wakasununguka kubatasales@pcbfuture.com , isu tichakupindura iwe ASAP.
Pashure: Mutungamiriri Bhodhi Rakadhindwa Circuit Assembly
Zvadaro: Flex pcb Assembly masevhisi
yakachipa pcb gungano
Electronics pcb Gungano
pcb gadzira mugadziri
pcb gungano padhuze neni
pcb musangano masevhisi
pcb kugadzira uye musangano
prototype pcb magungano
inokurumidza shanduko pcb gungano
Smt pcb Gungano
Kudzora bhodhi gungano
Vehicle GPS Tracker Dunhu pcb Assembly
Smart Imba Main Kudzora Bhodhi Dunhu Gungano